Umkhankaso wokugqamisa ubuciko namasiko akuleli
ICIKO uGreatjoy Ndlovu odweba izithombe ezithandwa umhlaba wonke. Isithombe: INSTAGRAM/ GREATJOY
Bongiwe Zuma | April 7, 2021
ABAKHIQIZI besiphuzo seGin esizakhela igama kuleli iBlack Crown Gin & Tonic bahlose ukuqhakambisa ikhono lamaciko akuleli kanye namasiko ngomkhankaso abawenza ezinkundleni zokuxhumana nasemcimbini .
Lo mkhankaso obizwa nge#WearYourCrown usebenzisana namaciko okubalwa kuwo abadwebi, abathwebuli bengqephu, abanekhono lokuxuba iziphuzo ezahlukene nabasiki bengqephu. Usuqalile ezinkundleni zokuxhumana kanti nabantu abaqokelwe wona bayawuqhuba nasemakhasini abo, kanjalo nasezindaweni abasebenzela kuzo nangasemakhaya abo.
OMUNYE wemsebenzi womthwebuli wezemfashini uThemba Mbuyisa oyingxenye womkhankaso weBlack Crown Gin & Tonic Isithombe: INSTAGRAM/ THEMBA MBUYISA
Abahleli bawo bawuqale ngenyanga yamagugu nyakenye kanti kulindeleke ukuthi kuqambe kushaya uMeyi sewuvuthiwe. Ibhungu lakuleli elinomsebenzi othandwa ngisho phesheya kwezilwandle uGreatjoy Ndlovu ungomunye wamaciko akhangisa ngomsebenzi wawo ngaphansi kwalo mkhankaso. UNdlovu umsebenzi wakhe uthandwa ngisho amaciko aphesheya kwezilwandle okubalwa noMarie DuVernay owathenga umsebenzi wakhe.
Abathwebuli bengqephu esemazingeni omhlaba oThemba Mbuyisa, David Blaq, Shane Burnell nabo bayingxenye yalo mkhankaso wezobuciko ngokubambisana noLeeroy Jason. Kulindeleke ukuthi izithombe zabo zengqephu zixoxe indaba ngemisiko eyahlukene yezinhlanga ezahlukene nezenza iNingizimu Afrika yehluke kwamanye amazwe. UJulian Short oxuba iziphuzo ngendlela ewubuciko evamise ukubonakala emcimbini emikhulu yethelevishini naye uqokelwe ukuba yingxenye yalo mkhankaso.
ODUME ngokudidiyela iziphuzo ezahlukene uJulian Short naye oyingxenye yalo mkhankaso Isithombe: INSTAGRAM/ JULIAN SHORT